Guriga Xayawaanka la oggol yahay
Xayawaan la guuray iyo kuwo xurmo leh, kuwaas oo si aad ah u jecel yihiin sayidkooda, oo ay ku jiraan carruurta. Caleenta kiriim-buluugta ah waxaa lagu kala soocaa maqnaansho iyo khibrad, waxay had iyo jeer diyaar u yihiin ficil.
Eeyadu waxay ku habboon yihiin inay ilaaliyaan ilaaliyaha, waxay u ekaadaan oo diyaar u yihiin inay ka digaan khatarta. Waxaa jira hees yar, laakiin haddii ay durbadiiba bilowday in ay dhawaaqdo, markaa waxay u muuqataa qurux badan.
Kerry-terre-eeygu ma aha mid aad u jilicsan oo leh xayawaan kale oo afar lugood leh. Caanaha ayaa u nugul gardarrada oo si dhab ah u kicin kara dagaal. Si loo xaliyo dhibaatadan, waxaa lagama maarmaan ah in la bilaabo tababarka xayawaanka iyo bulshadeeda sida ugu dhakhsaha badan.
In kasta oo ay xaqiiqadu tahay in kerry-terrere uu yahay xubin firfircoon oo qoyska ka mid ah, wuxuu u baahan yahay martiqaad rasmi ah, maaddaama uu xanaaqu uu yahay mid caan ah. Waxaa lagama maarmaan ah in la dhiso hoggaan la'aan rabshad wakhti gaaban. Marna ha uga tegin eey ilmo la'aan kormeer la'aan, waxaa lagama maarmaan ah in la baro ilmahaaga sida loola dhaqmo xayawaanka si sax ah.
Dabeecadeeda, terabiyada kiriimka ah waa haadi. Waa dareenka ugaarsiga oo aan u oggolaan inuu xayawaanka la ilaaliyo xayawaanka kale ee yaryar ama bisadaha. Ka-reebitaan waxaa loo tixgelin karaa kiiska kaliya marka eeyga uu ku koray xayawaan kale.
Kerry-Blue Terrier: heerka
Jidhka eey ayaa si adag u garaacaya, qaabka uu kufilan yahay iyo dhisidda saamiga. Marka loo eego dabeecadda, jidhku waa mid isdhaafsan oo muuqaal ahaan jir ahaan loo horumariyo. Isbedel kasta oo ka yimaada xeerka waxaa loo tixgeliyaa faa'idada, darnaanta taas oo ku xiran da'da iyo koritaanka guud ee xayawaanka. Sida caadiga ah, taranka ayaa leh astaamaha soo socda ee qaabdhismeedka jirka:
madaxa iyo qalfoofka ayaa leh isbeddel aan fiicnayn oo laga soocayo wejiga uumiga ah, xajmiga leh jajabkuna aad ayuu u xoog badan yahay, xajmigu waa awood;
Dhegaha waa inay ahaadaan V-qaabeeya, yar yar ama dhexdhexaad ah, horay;
qoorta ayaa xoog leh oo si habboon u gudubta garbaha;
daboolka ayaa si ballaaran loo beeray marwalba wuu sarreeyaa, badanaaba waa la xidhaa;
Jirku waa jilicsan iyo silsilad, daboolkiisu waa mid ballaaran oo la isku qurxiyo;
midabku wuxuu leeyahay hoos midab buluug ah, oo ku jira shimbiraha yar yar oo ah jaakad guduudan oo bunni ah;
miisaanka qof weyn oo lab ah waa inuu ahaado qiyaastii 17 kg, miisaanka haweenku waa qiyaastii 16 kg;
Sida ugu fiican, koritaanka waxaa loo maleynayaa inuu yahay 46-48 cm.
Kerry-Blue Terrier Puppies
Si habboon u kor loo qaado xayawaanka iyo hubinta horumarinta isdhexgalka, waxaa lagama maarmaan ah in la ilaaliyo laba xeer oo asaasi ah: cunto dheellitiran iyo dhaqdhaqaaq habboon oo jimicsi ah oo la doorto inta lagu jiro socodka. Ardayda Kerry terrier waxay u baahan yihiin daryeel iyo daryeel caafimaad oo ka timaadda mulkiilaha. Aynu tixgelinno qawaaniinta asaasiga ah ee nuxurka noocaan ah.
Ilmuhu wuxuu u baahan yahay inuu soo qaato jilicis madow. Baaxadda waa inay noqotaa qiyaastii 2 cm, dusha sare waa inuu ahaado mid xoog leh, oo aan ka yareyn hal iyo bar mitir dheer. Dumarka waa in aan loo adeegsanin takhasusle, maadaama ay tani ka dhalin karto kobcinta khaldan ee foosha.
Marka hore, socodka waa inuu noqdaa mid gaaban oo joogto ah. Socodka xayawaanka wuxuu yeelanayaa ilaa shan jeer maalintii, iyo eeyga weyn een saddex jeer. Socodka waa in la dedejiyaa oo firfircoonaa. Soo qaado alaabada aad ku ciyaarto xayawaanka xayawaanka rabaayada ah, suuf ama madadaalo kale. Ha iloobin inaad jebiso oo aad siiso ilmahaaga fasax.
Si aad u barato nadiifinta, waa inaad si joogto ah ugu qaadataa ilbiriqsiga isla markaaba ka dib markaad quudiso iyo hurdo. Tani waxay ku fiican tahay tababarka iyo waxbarashada. Laakiin qofka dhalinyarada ahi ma awoodi doono inuu diiradda saaro 10 daqiiqo. Mahad iyo isweydaarsi waa shuruudaha waalidnimada guuleysata.
Kerry-buluug-yari waa ugu horreyntii ugaadhsiga. Tani waa in la tixgeliyaa oo si joogta ah u fiiriyaa dareenka eeyga. "Toy" muuqaalka badanaa wuxuu keenaa xaqiiqda ah in milkiilayaashu aysan kor u qaadin eeyga iyo natiijada keenaysa dhibaatooyinka dambe.
Maxaad u baahan tahay kalluunka quraaradda?
Mycoplasmosis ee bisadaha
Waxyaabaha ku jira kalluunka aquarium
Qiimeynta cuntada eyga oo qalalan
Waraaqaha eeyga iyo da'da aadanaha
Calaacalaha lafaha eeyaha
Sidee u xajistaa?
Noocyada yaryar ee eeyaha
Qulqulka biyaha ee aquarium
Leptospirosis eeyaha - calaamadaha iyo daaweynta
Waa maxay waqtiga uurka ee bisadaha?
Sidee loo diyaariyaa dabagal loogu talagalay aquarium?
U soo jiid qolka qayb ahaan
Xanaanada ilmaha leh gacmo gaar ah
Waa maxay riyada macmacaanka?
Calaamadaha xasaasiyadda dadka waaweyn
Macmacaanka malabyada qalalan
Carruurnimada iyo barbaarinta carruurta ee dugsiga barbaarinta
Cuntooyinka ay ku jiraan gluten?
Caabuqa Rotavirus - Calaamadaha
Ceraxon - calaamadaha loo isticmaalo
Manikure Wedding 2015
Maandoriyaha miisaanka luminta, taas oo run ahaantii caawisa
Dharka Dumarka - Summer 2014
Bran Megan Markle ayaa ka hadlay fal-celinta aabaheed ee wareysiga wareysiga ah ee Prince Harry
Tamaandhada casiir yaanyo - cuntooyinka ugu caansan ee ilaalinta asalka ah
Kootada iyo soodhadhka dharka
Cudurka dhagaxa - sida loo ogaado calaamadaha ugu horeeya iyo joojinta cholelithiasis?
Cunto xumo: gabadh 8 bil jir ah oo miisaankeedu yahay 17 kg!
Dharka oo dhan ee qoyska